ဖေမီနိုတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်မှုက ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်
ရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်နှစ်ဦးအတွက် ပေါင်(၆)သောင်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ Firmino တို့ ဇနီးမောင်နှံ
9 Aug 2018 . 5:59 PM
လီဗာပူးလ်အသင်းက ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်မှူး ဖေမီနို Firmino နဲ့ သူ့ဇနီးဖြစ်သူ Larissa Pereira တို့ရဲ့ အလှူဒါနကတော့ တကယ့်ကို ချီးကျူးစရာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မျိုးရိုးလိုက်ပြီး ရှားရှားပါးပါးရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံက ကလေးငယ်နှစ်ဦးအတွက် ဆေးကုသမှုစရိတ်အဖြစ် ပေါင်(၆)သောင်းနီးပါး လှူဒါန်းခဲ့လို့ပါ။ အသက်(၆)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Joao de Amorim ဆိုသူ ကလေးငယ်နဲ့ လူ့လောကထဲကို ၀င်လာတာ (၁၁)လသာရှိသေးတဲ့ Miguel de Amorim တို့ဟာ နောက်ကျောရိုးကြွက်သား ချည့်နဲ့လာမှုကြောင့် အောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားလို့ မရဘဲ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရပြီး သူတို့မိဘတွေဟာ နောက်ထပ်ပေးရမယ့် ဆေးဖိုးကို မတတ်နိုင်တော့လို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ငွေကြေးလှူဒါန်းဖို့အတွက် တောင်းခံခဲ့ကြရတယ်။
ဆေးရုံမှာ နောက်ထပ်(၁)နှစ်ဆေးကုသမှု ခံယူဖို့အတွက် မိဘတွေရဲ့လက်ထဲမှာက ပေါင်(၈၂၇၀၃၂)သာ ရှိပြီး နောက်ထပ် ပေါင်(၅၉၁၃၂)လိုအပ်နေတာကြောင့် သူတို့ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အကူအညီတောင်းခံခဲ့တာပါ။ အဲဒီအကြောင်းကို သိရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ဖေမီနိုတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ လိုအပ်နေတဲ့ ပေါင်(၆)သောင်းနီးပါးကို ဆက်သွယ်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးနှစ်ဦးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ Gracieli Schlemmer က “Larissa Pereira ဟာ ကျွန်မဆီကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်တဲ့ ငွေကို လှူဒါန်းမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာကြောင့် ကျွန်မတို့ ရင်ထဲမှာ လောင်မြိုက်နေတဲ့မီးတွေ အေးငြိမ်းခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအလှူရှင်ပေါ်ဖို့ အချိန်အကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတာကြောင့် Larissa Pereira နဲ့ စကားပြောဆိုအပြီးမှာ ကျွန်မ အကြီးအကျယ် ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်”လို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့တယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ . . ဖေမီနိုတို့ ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အလှူအတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံး ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြရအောင်လား . . .
ရောဂါခံစားနရေတဲ့ ကလေးငယျနှဈဦးအတှကျ ပေါငျ(၆)သောငျး လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ Firmino တို့ ဇနီးမောငျနှံ
လီဗာပူးလျအသငျးက ဘရာဇီးလျတိုကျစဈမှူး ဖမေီနို Firmino နဲ့ သူ့ဇနီးဖွဈသူ Larissa Pereira တို့ရဲ့ အလှူဒါနကတော့ တကယျ့ကို ခြီးကြူးစရာပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ မြိုးရိုးလိုကျပွီး ရှားရှားပါးပါးရောဂါ ခံစားနရေတဲ့ ဘရာဇီးလျနိုငျငံက ကလေးငယျနှဈဦးအတှကျ ဆေးကုသမှုစရိတျအဖွဈ ပေါငျ(၆)သောငျးနီးပါး လှူဒါနျးခဲ့လို့ပါ။ အသကျ(၆)နှဈသာရှိသေးတဲ့ Joao de Amorim ဆိုသူ ကလေးငယျနဲ့ လူ့လောကထဲကို ဝငျလာတာ (၁၁)လသာရှိသေးတဲ့ Miguel de Amorim တို့ဟာ နောကျကြောရိုးကွှကျသား ခညျြ့နဲ့လာမှုကွောငျ့ အောကျပိုငျးလှုပျရှားလို့ မရဘဲ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနရေပွီး သူတို့မိဘတှဟော နောကျထပျပေးရမယျ့ ဆေးဖိုးကို မတတျနိုငျတော့လို့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှပေျေါမှာ ငှကွေေးလှူဒါနျးဖို့အတှကျ တောငျးခံခဲ့ကွရတယျ။
ဆေးရုံမှာ နောကျထပျ(၁)နှဈဆေးကုသမှု ခံယူဖို့အတှကျ မိဘတှရေဲ့လကျထဲမှာက ပေါငျ(၈၂၇၀၃၂)သာ ရှိပွီး နောကျထပျ ပေါငျ(၅၉၁၃၂)လိုအပျနတောကွောငျ့ သူတို့ အခကျအခဲကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ အကူအညီတောငျးခံခဲ့တာပါ။ အဲဒီအကွောငျးကို သိရှိသှားတဲ့နောကျမှာတော့ ဖမေီနိုတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ လိုအပျနတေဲ့ ပေါငျ(၆)သောငျးနီးပါးကို ဆကျသှယျလှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကလေးနှဈဦးရဲ့ မိခငျဖွဈသူ Gracieli Schlemmer က “Larissa Pereira ဟာ ကြှနျမဆီကို ဆကျသှယျခဲ့ပွီး လိုအပျတဲ့ ငှကေို လှူဒါနျးမယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာကွောငျ့ ကြှနျမတို့ ရငျထဲမှာ လောငျမွိုကျနတေဲ့မီးတှေ အေးငွိမျးခဲ့ရတယျ။ ဒီလိုအလှူရှငျပျေါဖို့ အခြိနျအကွာကွီး စောငျ့ခဲ့ရတာကွောငျ့ Larissa Pereira နဲ့ စကားပွောဆိုအပွီးမှာ ကြှနျမ အကွီးအကယျြ ငိုကွှေးခဲ့ပါတယျ”လို့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားခဲ့တယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ . . ဖမေီနိုတို့ ဇနီးမောငျနှံတို့ရဲ့ မှနျမွတျတဲ့အလှူအတှကျ ကြှနျတျောတို့တှေ အားလုံး ဆုတောငျးပေးလိုကျကွရအောငျလား . . .